OTU ESI EMEPỤTA NJIKỌ NA YANDEX DISK - YANDEX - 2019
Akwukwo na ndọtị PAGES ka ndị ọrụ nke ngwaahịa Apple maara nke ọma - nke a bụ isi nchịkọta nke nchịkọta ederede site na Cupertino ụlọ ọrụ, nke bụ otu okwu nke Microsoft Word. Taa anyị ga-agwa gị otu esi emeghe faịlụ dị na Windows.
Imeghe faịlụ PAGES
Ihe edere na ndọtị a bụ nke iWork Pages, Apple Office suite component. Nke a bụ usoro nhazi, ejedebere na Mac os X na iOS, ya mere na ọ gaghị arụ ọrụ iji mepee ya na Windows: enweghi usoro mmemme ọ bụla. Otú ọ dị, otu ụzọ ịmeghe PAGES na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ karịa brainchild nke Apple, ka nwere ike. Ihe ọ pụtara bụ na faịlụ PAGES, n'ụzọ bụ isi, bụ ihe ndekọ nke na-echekwa data ịhazi data. N'ihi nke a, a pụghị ịgbanwe faịlụ ntinye na ZIP, ma wee gbaa mbọ mepee ya na nchekwa. Usoro dị ka ndị a:
Mee ka egosiputa faịlụ.
Windows 7: mepee "Kọmputa m" wee pịa "Tọọ". Na nchịkọta nhọrọ, họrọ "Nhọrọ nchekwa na nchekwa".
Na windo meghere, gaa na taabụ "Lee". Pịgharịa gaa na listi ma wepu ya "Zoo ndọtị maka ụdị faịlụ aha" wee pịa "Tinye";
Windows 8 na 10: na nchekwa ọ bụla na-emeghe "Explorer"pịa bọtịnụ "Lee" ma lee igbe ahụ "Filename ndọtị".
Mgbe ihe ndị a gasịrị, ihe ndọtị PAGES ga-adị maka edezi. Pịa aka nri na akwụkwọ ahụ ma họrọ na menu ndokwa Kpọgharia aha.
Bugharịa cursor ruo njedebe nke faịlụ faịlụ site na iji òké ma ọ bụ igodo igodo wee họrọ ndọtị. Pịa na keyboard Backspace ma ọ bụ Hichapụiwepu ya.
Tinye ndọtị ọhụrụ ZIP wee pịa Tinye. Na windo ịdọ aka ná ntị, pịa "Ee".
A ga-amata faịlụ ahụ dị ka ihe ndekọ na data. Ya mere, ọ ga-ekwe omume imepe ya na nchekwa ọ bụla kwesịrị ekwesị - dịka ọmụmaatụ, WinRAR ma ọ bụ 7-ZIP.
Mepee ihe omume ahụ ma jiri onye njikwa faịlụ na-abanye na nchekwa ahụ na akwụkwọ PAGES, nke nwere mgbatị gbanwee na .zip.
Pịa ugboro abụọ na akwụkwọ iji mepee ya. Ihe ndị dị na ebe nchekwa ahụ ga-adị maka ikiri, edetu ma ọ bụ edezi.
Ọ bụrụ na VinRAR adịghị afọ ojuju gị, ị nwere ike iji ihe ọ bụla ọzọ na-edebe nchekwa.
Hụkwa: Mepee faịlụ na ụdị ZIP
Dị ka ị nwere ike ịhụ, imeghe faịlụ na ndọtị PAGES, ọ dịghị mkpa ịnweta kọmputa ma ọ bụ ngwaọrụ mobile site na Apple.
N'eziokwu, a ghaghị ịghọta na ụzọ a nwere ụfọdụ njedebe.